မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် Discovery Coaching, Training & Consulting Co,.ltd ရဲ့ CEO ကိုမင်းသိန်းထွန်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း | Than Lwin Times
Home သတင်း စီးပွားရေး မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် Discovery Coaching, Training & Consulting Co,.ltd ရဲ့ CEO ကိုမင်းသိန်းထွန်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် Discovery Coaching, Training & Consulting Co,.ltd ရဲ့ CEO ကိုမင်းသိန်းထွန်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
မေး – လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေအရ ရှေ့အလားအလာဘယ်လိုရှိပါသလဲ၊
ဖြေ – စီပွားရေးက ဒီလာမယ့်နှစ်မှာ အခြေအနေကောင်းလာဖို့ အလားအလာ တော်တော်နှေးမယ်လို့ မြင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ရာဘာ၊ ကွမ်းသီးတွေကလည်း ဈေးကောင်းမရနိုင်ဘူး။ ပြည်ပရောက်နေသူအများစုကလည်း လုပ်ငန်းအခြေအနေမကောင်းတာကြားထားရတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဘုရားဖူးလုပ်ငန်း၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေ၊ ရှင်ပြု၊ မင်္ဂလာဆောင်စတဲ့ လူစုလူဝေး လူတွေငွေသုံးရမယ့်ကိစ္စတော်တော်များများရပ်ထားရတော့ စီးပွားရေးအလားအလာက အေးနေအုံးမယ် ထင်ပါတယ်။
မေး – ကိုဗစ်ကာလ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတုံ့ဆိုင်းမှုတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေရှိလာတယ်၊ ရှေ့ဆက်လည်း ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သတိပေးမှုတွေရှိလာတယ်၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လုပ်ငန်းတွေ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပိုပြီး ထိခိုက်သွားနိုင်ပါသလဲ၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသလဲ၊ဖြေ – စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတိုင်း ဒီအချိန်မှာ လုပ်ငန်းထိခိုက်သူတော်တော်များများရှိသလို လုပ်ငန်းအကြီးအကျယ် အဆင်ပြေသွားတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတယ်။
ဥပမာ – ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ အထည်လုပ်ငန်းတွေ၊ ဇာတ်သဘင်ဂီတလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေက ထိခိုက်ပြီး ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊ Online Business လုပ်ငန်း၊ Delivery လုပ်ငန်းတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ယခင်အခြေအနေထက်ကို ပိုပြီးအဆင်ပြေလာတာတွေ့ရတယ်။ အဆင်မပြေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို အဓိက မျှဝေပေးချင်တာက (၃) ချက်ရှိတယ်။နံပါတ် ၁ က Mindset ပြောင်းဖို့လိုတယ်။
အရင်တုန်းက ဒီလိုအခက်အခဲအကြပ်အတည်းမျိုးထက် လူတိုင်း အတိတ်မှာ အနည်းနဲ့အများ ရှိခဲ့ဖူးကြတာပဲ။ အတိတ်က အခက်အခဲကို ပြန်ကြည့်ပြီး အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ဘယ်လိုရှင်ဆိုင်ပြီး ဖြေရှင်းခဲ့သလဲ? အဲလိုမျိုး စဉ်းစားကြည့်ရင် အခုအခြေအနေမှာ နေသာထိုင်သာထိုင်သာရှိသွားမယ်။ နောက်ပြီး အခုအခြေအနေကနေ ကိုယ့်အတွက် ကောင်းတာပါရှိလဲ? ကိုယ့်အတွက် ကောင်းဖို့ပဲဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီး နည်းလမ်းရှာကြည့်ပါ။ အခွင့်အလမ်းတွေ မြင်လာမယ်။ ကျွန်တော်တို့က စိတ်ဓါတ်ကျပြီး နည်းလမ်းမရှာဘူးဆိုရင် ပြန်ရုန်းထဖို့ ပိုပြီးခက်ခဲသွားနိုင်တယ်။
နံပါတ် ၂ က လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ကျွန်တော့်ဆရာ World No.1 Executive Coach Dr. Marshall Goldsmith က ကိုယ့်ကိုယ် ဒီနေရာရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့အရာက နောက်တစ်နေရာရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ဆိုတယ်။ သဘောက လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဒီအခြေအနေအတိုင်း တစ်လ သိန်း ၁၀၀ ဝင်ငွေရနေတဲ့လုပ်ငန်းကနေ သိန်း ၂၀၀ ဝင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သိန်း ၂၀၀ ရဖို့ ရယူနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ၊ အရင်းအမြစ်တွေ ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဆက်ပြီး လေ့လာသင်ယူနေဖို့လိုတယ်။ အခု အဆိုးထဲက အကောင်းဘာရှိလဲဆိုတော့ အရင်တုန်းက သင်တန်းတက်ရင် ရန်ကုန်သွားရတယ်။ အချို့ဆို ပြည်ပအထိ ထွက်ပြီးလေ့လာသင်ယူမှရတယ်။ အခု တစ်ကမ္ဘာလုံး လေ့လာချင်တဲ့ပညာရပ်တွေ အိုမကွာ၊ အိမ်မကွာနဲ့ အိမ်မှာနေပြီး လေ့လာသင်ယူလို့ရနေတယ်။ ဒါကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးချဖို့လိုတယ်။
နံပါတ် (၃)က လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အခုလို အလုပ်ပါးတဲ့အချိန်မှာ Customer Relationship ကို ကောင်းအောင် ပိုပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဝန်ထမ်းမှာ ကိုယ့်ယုံကြည်မှု၊ တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ မကိုက်တဲ့သူတွေကို အလုပ်ကနေ အနားပေးလို့ရတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကို Sale, Customer Service အပိုင်းတွေ လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ အချိန်ရမယ်။ နောက် လုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး JD, SOP, Check List တွေ မရှိရင် ရေးထားလို့ရတယ်။ ရှိရင် Update လုပ်လို့ရတယ်။ နောက် စာရင်းဇယားအပိုင်းတွေ၊ ရရန်၊ ပေးရန်အပိုင်းတွေ ပြန်စစ်ပြီး လုပ်လို့ရတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ အားမလို အားမရတဲ့အပိုင်းတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ရတယ်။
မေး – ဘယ်တော့ရပ်မယ်မှန်းမသိတဲ့ကိုဗစ်ကြောင့် နိုင်ငံတော်က ချပေးနေတဲ့ ကိုဗစ်ချေးငွေတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အသက်ဆက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ – အစိုးရရဲ့ချေးငွေပေါ်လစီနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကျွန်တော်မသိထားတော့ ဒါကို ပြောဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့မြင်တာက တိုင်းပြည်ရဲ့ အေးလာမယ့်စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် အခု ချထားတဲ့ချေးငွေက လုပ်ငန်းရှင်အများစုအတွက် အသက်ဆက်ဖို့ ခက်ခဲနေအုံးမယ်ထင်တယ်။
မေး – အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အကြံပြုချက်လေးပေးပါဦး။အားလုံးကိုအကြံပြုချင်တာက အခုလို အခက်အခဲအကြပ်အတည်းကာလမှာ လုပ်ငန်းအဆင်မပြေတာက ငြီးနေရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ရပ်နေလို့မရဘူး။ ဒီအခက်အခဲ ဒီအကြပ်အတည်းပြီးလို့ ကမ္ဘာကြီးကျန်းမာလာတဲ့နေ့မှာ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေးတွေက အရင်အခြေအနေထက် ပိုမြင့်လာအောင် ဘာတွေ လုပ်နေသလဲက အားလုံးအတွက် ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်။
အခက်အခဲအကြပ်အတည်းက Covid -19 ပြီးရင်လည်း အခြားခေါင်းစဉ်နဲ့ ထပ်လာကောင်း လာနေအုံးမယ်။ အဓိက ကျွန်တော်တို့ ဒီအခြေအနေကို မကြိုက်ရင် ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ မရှိတဲ့အရာကို အာရုံစိုက်နေရင် ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်။ စီးပွားရေးမကောင်းလို့ ငြီးနေရင်းနဲ့ မိသားစု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေးအပိုင်းကို အာရုံမစိုက်နိုင်ရင် ဘဝအတွက် ပိုပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာမယ်။ ဘယ်လိုစပြောင်းမလဲ မသိရင် ဒီဘက်ခေတ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ မသိတာကို သိလာအောင် သူတို့လုပ်နေတဲ့နည်းလမ်းတွေ ဘာတွေရှိလဲ။ ကြည့်ကြည့်ပါ။ အဲလိုကြည့်နိုင်ရင် အဖြေတော်တော်တွေ့လာမယ်။ အဓိက ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက် ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ၁၀၀ % တာဝန်ယူပြီး ကြိုးစားနေပါ။ အရာရာ တိုးတက်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ …
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ – ရဲနိုင်
Previous articleမွန်ပြည်သစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေက ဒေသခံတွေကို ရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးမှုလိုအပ်
Next articleမဲစာရင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်များ မကျန်ခဲ့စေဖို့ အိမ်တိုင်ရာရောက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်အဖွဲ့က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထား မရှိဘူးလို့ ပြောကြား
မွန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရပ်နားခဲ့ရ